के ब्लुस्टेक्स सुरक्षित छ? हो, तपाईं विन्डोज र म्याकमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ - सफ्टवेयर
के ब्लुस्टेक्स सुरक्षित छ? हो, तपाईं विन्डोज र म्याकमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ
अझै, एउटा उत्तर खोजी गर्दैछ जुन ब्लूस्ट्याक्स सुरक्षाको बारेमा तपाइँको सबै शंकालाई हटाउँछ?त्यसो भए आज तपाईं सहि ठाउँमा पुग्नुभयो। ठीक छ, छोटो प्रश्नको उत्तर दिन ब्लूस्ट्याक्स सुरक्षित छ वा छैन सुरक्षित छ वा छैन?
यो प्रयोग गर्न १००% सुरक्षित छ।तर यदि तपाईं अझै ब्लूस्ट्याक्सको बारेमा अझ बढी जान्न चाहानुहुन्छ भने सम्पूर्ण पोस्ट पढ्नुहोस् जहाँ हामीले पूर्ण ब्रेकडाउन गर्यौं र केही प्यारामिटरहरू वर्णन गरे जहाँ ब्लूस्ट्याक्स प्रयोग गर्न सुरक्षित छ।
ब्लुस्टेक्स समीक्षा - पूर्ण जानकारी
ब्लुएस्टेक्स एक प्रोग्राम हो जुन तपाईको डेस्कटपमा एन्ड्रोइड अपरेटि system प्रणाली अनुकरण गर्दछ। साधारणतया, यो अनुप्रयोगले तपाईको प्रणालीको अपरेटिंग सिस्टममा एन्ड्रोइड अपरेटि system प्रणाली चलाउँछ। तपाईं डेस्कटपमा ब्लूस्ट्याक्सको प्रयोग गरेर सबै एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू चलाउन सक्नुहुनेछ।
ब्लूस्ट्याक्सको एक सक्रिय उपयोगकर्ता आधार छ यसमा 37 37० मिलियन प्रयोगकर्ताहरू समावेश छन्। ब्लूस्ट्याक्स गेमरहरू बीच व्यापक रूपमा लोकप्रिय छ किनकि यसले उनीहरूलाई आफ्नो मनपर्ने खेल खेल्न दिन्छ जुन पीसीमा उपलब्ध छैन एक इमुलेटर मार्फत, र PUBG मोबाइल जस्ता खेलहरू खेल्नुहोस् , ड्युटी मोबाईलको कल, आदि।
यदि ब्लूस्ट्याक्स सुरक्षित थिएन भने, 37 37 करोड प्रयोगकर्ताहरू मध्ये कसैले बग रिपोर्ट गरेको हुनसक्दछ, तर त्यो त्यस्तो छैन किनकि कसैले पनि ब्लुस्टेक्स सम्बन्धी कुनै मुद्दाको रिपोर्ट गरेको छैन।
खोज्दै विन्डोज १० को लागि सर्वश्रेष्ठ एन्ड्रोइड इमुलेटरहरू ? हाम्रो बाट जाँच गर्नुहोस् Emulators खण्ड।
के ब्लूस्ट्याक्सले तपाईंको पीसीको प्रदर्शनलाई बाधा पुर्‍याउँछ?
ठिक छ, यो सब भन्दा सोधिने प्रश्न हो, र तपाईंले यसको बारेमा पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, त्यहाँ विनिर्देशहरूको एक सेट छ कि आवश्यक छ यदि तपाईं आफ्नो पीसीमा ब्लूस्ट्याक्स चलाउन चाहानुहुन्छ भने।पीसीमा ब्लुस्टेक्स चलाउन, तपाईलाई कम्तिमा २ जीबी मेमोरी चाहिन्छ।
व्यक्तिहरू कम विशिष्टताहरू भएको पीसीमा ब्लूस्ट्याक्स स्थापना गर्छन् र उनीहरूको पीसीको प्रदर्शनमा बाधा पुर्‍याउँछन्।तर यदि तपाईंसँग उच्च-अन्तरालको पीसी छ जुन २ GB भन्दा बढि र्याम भएको छ र पछिल्लो प्रोसेसर स्थापना गरिएको छ भने, तब ब्लुस्ट्याक्सले तपाईंको पीसीको प्रदर्शनमा बाधा पुर्‍याउँदैन र सजिलै चल्नेछ।
यहाँ केहि स्पेसिफिकेसनहरू छन् जुन तपाईंलाई आवश्यक छ यदि तपाईं चलाउन चाहनुहुन्छविन्डोजमा ब्लूस्ट्याक्समेशिन:
अपरेटिंग प्रणाली:विन्डोज7र माथिको।
र्याम: GB जीबी वा ठूलो।
आन्तरिक डिस्क ठाउँ:१ GB जीबी वा ठूलो।
प्रोसेसर:कुनै पनि Intel वा AMD प्रोसेसर।
GPU: 10 १०० वा माथिको कुनै Nvidia GPU ले काम गर्दछ।
यहाँ केहि स्पेसिफिकेसनहरू छन् जुन तपाईंलाई आवश्यक छ यदि तपाईं चलाउन चाहनुहुन्छम्याकमा ब्लूस्ट्याक्स:
अपरेटिंग प्रणाली:म्याक ओएस सिएरा र माथिको।
प्रोसेसर:कुनै पनि इंटेल प्रोसेसर।
के ब्लूस्ट्याक्समा कुनै खराब प्रोग्राम छ?
ब्लूस्ट्याक्सको कुनै मालिसियस प्रोग्राम छ वा छैन भनेर जाँच्नका लागि हामीले विभिन्न कम्प्युटरहरूमा ब्लूस्ट्याक्स स्थापना गर्यौं बिभिन्न एन्टिभाइरस भएको यसमा क्विकहिल, नोर्टन 360 360०, एभीजी, अवास्ट आदि।
हामीले त्यसो गरेको कारण यो हो कि जब तपाइँ तपाइँको कम्प्यूटरमा कुनै विशेष प्रोग्राम स्थापना गर्नुहुन्छ तपाइँको कम्प्युटरको एन्टिभाइरसले खराब स्क्रिप्टको उपस्थिति जाँच गर्न प्रोग्राम स्क्यान गर्दछ। यदि स्थापित भइरहेको प्रोग्रामको स्रोत कोडमा मालिसियस स्क्रिप्ट छ भने, एन्टिभाइरसले तपाइँको स्क्रिनमा एक सन्देश पप गर्दछ र कार्यक्रम स्वचालित रूपमा मेटाउनेछ।
जब हामी यो गर्‍यौं, हामीले कहिले पनि कुनै द्वेषयुक्त स्क्रिप्ट पाएनौं जुन एन्टिभाइरसद्वारा स indicated्केत गरिएको वा फेला पारिएको थियो र ब्लूस्ट्याक्स सजीलो चलिरहेको थियो।
के ब्लुस्टेक्स कानुनी प्रयोग गर्दैछ?
हामी सबैलाई थाहा छ कि, एन्ड्रोइड एक खुला स्रोत अपरेटिंग प्रणाली हो र ब्लूस्ट्याक्स एक इमुलेटर हो, जुन तपाईंको डेस्कटपमा एन्ड्रोइड अपरेटिंग सिस्टम इमुलेट गर्दछ वा चलाउँछ। एन्ड्रोइड एक खुला स्रोत अपरेटिंग प्रणाली हो जसको मतलब कसैले पनि यसको प्रयोगको लागि मुद्दा हाल्न सक्दैन। त्यसकारण ब्लूस्ट्याक्स प्रयोग गर्न कानूनी छ।
निष्कर्ष - ब्लुस्टेक्स सुरक्षित छ?
यस पोष्टमा जानु भएपछि, हामीले एउटा जवाफ पायौं 'के ब्लूस्ट्याक्स सुरक्षित छ?'
उत्तर छहो;यो छब्लूस्ट्याक्स प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा सुरक्षित। हामीले कुनै पनि मालवेयर वा प्रदर्शन मुद्दाहरू फेला पारेनौं जब हामी यसलाई जाँच गर्दै थियौं।
यद्यपि यहाँ केहि तरिकाहरू छन् जुन तपाईं ब्लूस्ट्याक्स सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ:
यसको आधिकारिक वेबसाइटबाट मात्र ब्लूस्ट्याक्स डाउनलोड गर्नुहोस्। यसलाई तेस्रो-पार्टी वेबसाइटबाट डाउनलोड नगर्नुहोस्। हामीले तपाईंलाई ब्लूस्ट्याक्समा आधिकारिक लिंक प्रदान गरेका छौं जहाँ तपाईं यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।
कम-अन्त विनिर्देशनहरू भएको पीसीमा निलो स्ट्याक्स प्रयोग नगर्नुहोस्। हामीले माथि विनिर्देशहरूको सूची समावेश गरेका छौं जुन तपाईंले आफ्नो विन्डोज र म्याक अपरेटिंग प्रणालीहरूमा ब्लूस्ट्याक्स सजिलैसँग चलाउन आवश्यक पर्दछ।
एकचोटि तपाईंले ब्लूस्ट्याक्स स्थापना गर्नुभयो मात्र अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्नुहोस् जुन गुगल प्ले स्टोरबाट प्रमाणित हुन्छ।
हामी आशा गर्दछौं कि यो पोस्टले तपाईंको प्रश्नको उत्तर फेला पार्नमा मद्दत गर्‍यो। यदि तपाइँले पोष्ट मनपराउनु भयो वा यदि तपाइँसँग यसको बारेमा कुनै सुझाव वा विचारहरू छन् भने, तिनीहरूलाई टिप्पणी बाकसमा राख्नुहोस्।
विन्डोज १० को लागी जुम गर्नुहोस्
भुक्तानी नगरी YouTube मा चलचित्रहरू हेर्नुहोस्
शीर्ष दस नि: शुल्क फिल्म साइटहरू अनलाइन
टिभी कार्यक्रमहरू हेर्न उत्तम ठाउँहरू
कसरी डिज्नी प्लस परीक्षण रद्द गर्ने
समर्थक उपकरणमा पिटाई बनाउने